Kuuriyada Waqooyi oo ku Goodisay in ay ‘Australia Gantaalada Nukliyeerka ku Garaacayso’ – Radio Daljir
Abriil 23, 2017 2:25 b 0
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuuriya Waqooyi, asaga oo dabajooga hadalkii Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Australia, Marwo Julie Bishop, oo shir saxaafadeed si wadajir ah ula qabatay Madaxweyne kuxigeenka Maraykanka, Mike Pence, ayaa hanjabaad culus u diray dawladda Australia. Afhayeenka ayaa yiri ‘ciidamadda difaaca dalku gantaalo nukliyeer ah bay Australia ku duqayn doonaan, haddii Australia ay si axmaqnimo ah qowsaar ugu noqoto siyaasadda Maraykanka.’
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Australia, Julie Bishop, ayaa tiri Australia uma dulqaadan doonto in Kuuriyada Waqooyi awood u yeelato haysashada iyo rididda gantaalada Nukliyeerka.
Madaxweyne Kuxigeenka Maraykanka, Mike Pence, ayaa booqasho looga tabaabushaysanayo sidii laga yeeli lahaa xukuumadda kaligitakiska ah ee Kim Jong-un ku jooga Australia.
Maraakiibta dagaalka ee diyaarad-qaadka loo yaqaan uuna huggaaminayo diyaarad-qaadka USS Carl Vinson ayaa hadda loo leexiyey dhanka badda Japan iyo dhinaca Waqooyiga Kuuriya. Raxanta USS carl Vinson ayaa la filayaa in ay aagga hawlgalka soo gaaraan biloowga aabuuca danbe.
Donald Trump, Madaxweynaha Maraykanka, oo ka hadlaya awoodda ciidmada USA ayaa yiri, “submarines-ka USA ee Kuuriyada Waqooyi badda hoosteeda ka daalacanaya wax badan ayey ka quwad weynyihiin diyaar-qaadka Carl Vinson.”
Maraakiibta Ruushka iyo kuwa Shiinaha ee wax basaaasa ay ayana dabajooga kuwa Maraykanka, ayaga oo u tooghaya dagaal waqti kasta dhici kara.
Sida Soomaalidu ku maahmaahdo “balaayo daaman la qabto bay leedahay ee dabo la qabto ma leh” ayaa sidoo kale Shiinuhu wuxuu Ruushka la kaashanaya in lago hortago dagaal dhaca oo aan cidna hadhoow ku faa’iidi doonin.
Koonfurta Kuuriya, siiba magaala madaxda Seoul, oo ay isku muuqdaa labada ciidan ee Waqooyiga iyo Koonfurta baanba dagaal laga hadal hayn oo aad loogu mashquulsanyahay doorashada Madaxweynaha dalka ee 9 May.
Madaxweynihii hore ee Koonfurta Kuuriya, Park Geun-hye, aayaa xil-ka-qaadis lagu sameeyey, looguna daray xabsi.
Dadka siyaasadda saadaaliya ayaa welwel-la’aanta dadka Kuuriyada Koonfureed ku macneeyey mid xaqiiqada ku salaysan, maxaa yeelay sannadkii 11 bilood bay si nabadi ku jirto ula macaamilaan Waqooyiga, bisha hartayna waa bisha hanjabaadaha hawada la isku mariyo. Saas oo ay tahay, khatarka dagaal dhacaa waa mid halis ku ah jiritaanka Seoul. Magaalada Seoul oo ay deganyihiin dad ka badan 11 milyan oo qof waxay 56KM u jirtaa difaaca iyo gantaalada ridada dheer ee ciidamada Kuuriyada Waqooyi.